The Rohingya News Bank : 2017
Myanmar’s Rohingya Crisis Meets Reality (ဘာသာပြန် အောက်မှာ ဖော်ပြထားသည် )
Labels: 2017, Article Rohingya Creisis, en, Kevin Rudd, mm, NY
Rohingya Genocide Remembrance Day event - in ROHINGYA language
Rohingya Genocide Remembrance Day Event - 25th August Four years of impunity: seeking justice, accountability, and solidarity Rohingya Session
Labels: 2017, 2021, en, mm, Rohingya Rmemberance Day, Video
The following is the truest and most comprehensive account of the presence the self-identified race in northern-Rakhine in Myanmar. I claimed thus, because it was written without any prejudice or bias toward any race or religion. Also, it was written based on the personal experiences ofaperson, who had an in depth knowledge of the history of the emergence of the self-identified term and not from hearsays from either sides of the conflicts or from the lobbyists, NGOs and various envoys, rapporteurs, who are mostly biased. That person is me
Labels: 2017, Article, en, Khin Maung Myint, Rakhine Issue
Labels: 2017, 2020, 2021, Concern, en, Report, Rohingya
An aerial view shows burned down villages once inhabited by the Rohingya seen from the Myanmar military helicopters that carried the U.N. envoys to northern Rakhine state, Myanmar on May 1, 2018 Reuters
Labels: 2017, 2020, en, News, Rakhine, Rohingya Crisis
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေကို အကြမ်းဖျင်း လေ့ လာခြင်း
၁၉၈၂ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသား ဥပဒေမှာ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ လက်ထက် တတိယအကြိမ် ပြည် သူ့ လွှတ်တော် တတိယအစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြု ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုဥပဒေနှင့်ပတ်သက် ၍ နည်းဥပဒေများ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်း မရှိ ပေ။ ထိုဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းရသည့် နောက်ခံ သ မိုင်းကြောင်းများ ရှိလေသည်။
Labels: 1982, ၁၉၈၂-ခုနှစ်နိုင်ငံသားဥပဒေ, 2017, mm
ဘူးသီးတောင်အခြေစိုက် ခမရ (၃၄၅) ခြေမြန်မတပ်ရင်း၊ ပြန်တမ်းဝင်အမှတ် ကြည်း/ ၅၄၇၃၈ ဗိုလ်ကြီးညီညီဇော်
ဘူးသီးတောင်အခြေစိုက် စကခ (၁၅) လက်အောက်ခံ ခမရ (၃၄၅) ခြေမြန်တပ်ရင်း၊ ပြန်တမ်းဝင်အမှတ် ကြည်း/၅၄၇၃၈ ဗိုလ်ကြီးညီညီဇော်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မူဆလင်အရေးအခင်းအတွင်း နယ်မြေရှင်းလင်းရေး တွင် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပါဝင်ခဲ့ပုံနှင့်ပတ်သက်၍ အင်တာဗျူး အပိုင်း (၁)
Labels: 2017, 2020, AA, mm, နယ်မြေရှင်းလင်းရေး, ဗိုလ်ကြီးညီညီဇော်, ဘူးသီးတောင်မြို့
Raising awareness of the international human rights of the Rohingya
Raising awareness of the international human rights of the Rohingya | Watch News Videos Online
Watch Raising awareness of the international human rights of the Rohingya Video Online, on GlobalNews.ca
Yasmin Ullah from the Rohingya Human Rights Network tells Global News about the latest in the refugee crisis and persecution in Myanmar.
Labels: 2017, en, Video, Yasmin Ullah
by The Voice Journal Sep 14, 2017
ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်အတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှ မွတ်ဆလင်များ အကြမ်းဖက်ခံရမှုဓာတ်ပုံများဟုဆိုကာ အ ခြားနိုင်ငံများမှ ရုပ်ပုံများကို ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံး လူမှုကွန်ရက်ဖြစ်သည့် တွစ်တာ (twitter) ၌ အသုံးပြုဖြန့် ဝေခဲ့သည့် တူရကီနိုင်ငံ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်၏လုပ်ရပ်အား ဖော်ထုတ်လိုက်နိုင်ခြင်းသည် အမှန်စစ်စစ် အား ဖြင့် မြန်မာတို့၏ ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Labels: 2017, mm, The Voice, ဒီပလိုမေစီ, ရခိုင်ပဋိပက္ခ, ဆောင်းပါး
To insist on the Rohingya status asavictimized religious minority while ignoring other factors cements their position as outsiders, fueling exclusionary forms of both politics and religion.
International human rights advocates who want to help the Rohingya and other persecuted groups are not furthering their causes by seeing religious violence behind every corner. In the case of the Rohingya, advocates should stop fostering the narrative of religious intolerance and instead insist that the Burmese government treat the Rohingya as human beings, and as legitimate citizens of Myanmar, worthy of dignity and respect.
For decades, the Rohingya have been denied citizenship by the Burmese state, which falsely classifies them as Bengali immigrants and subjects them to discrimination and scorn. Now the military is undertaking what UN high commissioner for human rights Zeid Ra’ad Al Hussein calls “a textbook example of ethnic cleansing.” The United Nations has described the situation as catastrophic.
Labels: 2017, Article, en, Religious Rights, Rohingya
ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ဘာသာရေးအခွင့်အရေးဘက်က ရပ်တည် ခြင်း ဖြင့် ၎င်းတို့ကို မကယ်တင်နိုင်၊ သို့ဆိုလျှင် ဘာက ကယ်တင်နိုင်မလဲ
အခြားသောအကြောင်းပစ္စယများကို လျစ်လျူရှုပြီး ရိုဟင်ဂျာတို့အပေါ် အနိုင်ကျင့်ခံ ဘာသာရေး လူနည်းစု အဖြစ်ချည်းသာ ပြောပြီးရင်းပြောနေကြခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံသားမဟုတ်သူ သူစိမ်းများ ဖြစ်သည်ဆို သော အနေအထားကိုသာ သွားသွားပြီး အားကောင်းအောင် လုပ်ပေးနေသလိုဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေး အရရော ဘာသာရေးအရပါ ၎င်းတို့ကို ဖယ်ထုတ်ထားသည့် ပုံသဏ္ဌာန်များကို ထပ်လောင်း မီးထိုးပေးသလို ဖြစ်နေ ပါသည်။
ရိုဟင်ဂျာနှင့် တခြားသော နှိပ်စက်ခံလူအုပ်စုများကို ကူညီလိုသော နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်ရွက် သူ များသည် ဖြစ်စဉ်တိုင်းအပေါ် ဘာသာရေးအကြမ်းဖက်မှုဟု မြင်ပြီး ဘာသာရေး အခွင့်အရေး ထက် ပိုပြီး ရှေ့ဆက် မလုပ်ဆောင်ကြတော့ပါ။ ရိုဟင်ဂျာတို့ကိစ္စတွင် ၎င်းတို့ အရေးအတွက် တောင်းဆို တိုက်ပွဲဝင် ပေး နေသူတို့အနေဖြင့် ယခုဖြစ်စဉ်အပေါ် ဘာသာရေးချင်းပဋိပက္ခဖြစ်သည့် သဘောမျိုး ဇောင်းပေး ပြောဆို နေ ကြခြင်းကို ရပ်၍ ရိုဟင်ဂျာတို့အား လူအဖြစ်ဆက်ဆံရန်နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် လေးစားမှုကို ခံယူထိုက်သည့် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်သော နိုင်ငံသားများအဖြစ် ဆက်ဆံဖို့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်းခြင်းကိုသာ လုပ်သင့်ပါ သည်။
Labels: 2017, mm, ကယ်တင်ရေး, ရိုဟင်ဂျာ, ဆောင်းပါး
VOA Burmese interview with Dr Zarni
Labels: 2017, Audio, Interview, mm, ဗွီအိုအေ, ဒေါက်တာဇာနည်, မေးမြန်းခန်း
Labels: 2017, Audio, en, Genocide, Interview, Rohingya Crisis, Yale University
Labels: 2017, 2019, Article, Asia Times, en, Myanmar Military, Rakhine, Rohingya
ARSA အဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်တွေကို စုံစမ်း ဖို့ တပ်မတော် ခုံရုံးဖွဲ့စည်း
ARSA အဖွဲ့ဝင်တွေကို တွေ့ရစဉ်
ရခိုင်ပြည်နယ် ဘူးသီးတောင်- မောင်တောဒေသတွေမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် သြဂုတ်လက ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ARSA အဖွဲ့ ရဲ့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်ဖြစ်ရပ်တွေကို စစ်ဆေးဖို့ တပ်မတော်က ခုံရုံး ဖွဲ့စည်းလိုက် ကြောင်း တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
Labels: 2017, 2019, ARSA, mm, RFA Burmese, စုံစမ်းရေးအဖွဲ
( 08.02.2018 ) Massacre in Myanmar A REUTERS SPECIAL REPORT
Labels: 2017, 2018, en, Inn Din, killed, Massacre, Maung Daw, Military, Rohingya
Massacre by the river, Burmese army Crime against Humanity in Tula Toli ( HRW )
Burma1217HRW Web by mayunadi on Scribd
Labels: 2017, HRW, Report, Rohingya, Tula_Toli